IHE MERE PS4 DỊ ICHE NA PRO NA SLIM: IJI TỤNYERE NSỤGHARỊ NKE CONSOLES - NSOGBU EGWUREGWU - 2019
Kedu ihe dị iche n'etiti ụdị PS4 Pro na Slim na-adịkarị
Egwuregwu egwuregwu na-enye ohere ịmikpu onwe gị na arụmụka na-akpali akpali na elu-mma eserese na ụda. Sony PlayStation na Xbox na-ekekọrịta ahịa egwuregwu ma bụrụ ihe arụmụka mgbe niile n'etiti ndị ọrụ. Ihe ndị bara uru na ọghọm nke consoles ndị a, anyị na-aghọta ihe anyị mere n'oge gara aga. N'ebe a, anyị ga-agwa gị otu PS4 dị na mbụ si dị iche na nsụgharị Pro na Slim.
Olee otú PS4 si dị iche na nsụgharị Pro na Slim
Isiokwu: Sony PlayStation 4 ngwepụta ụdị
Video: nyochaa nke atọ nke PS4
Egwuregwu PS4 mbụ bụ ọgbọ nke ọgbọ asatọ; ahịa ya malitere n'afọ 2013. Otu njikwa mara mma na nke dị ike meriri obi ndị ahịa na ike ya, ekele nke o mere ka ọ nwee ike igwu egwuregwu dika 1080p. Site na njikwa nke ọgbọ gara aga, a na-ama ya site n'ichetawanye arụmọrụ, arụmọrụ nke ọma, ekele nke onyinyo ahụ ghọtakwuru, ndị nchịkọta ndị na-ahụkebe toro.
Afọ atọ ka nke ahụ gasịrị, hụrụ ìhè nke ụdị mmelite nke a na - akpọ PS4 Slim. Ihe dị iche site na nke mbụ bụrịrị ihe ngosi na ọdịdị - njirimara dị ezigbo mkpa karịa onye bu ya ụzọ, ọzọkwa, nhazi ya agbanweela. Nkọwapụta agbanweela: usoro emelitere na "thinner" nke console nwere njikọ HDMI, ihe ọhụrụ Bluetooth na ikike ịwelite Wi-Fi ugboro 5 GHz.
PS4 Pro anaghịkwa ahapụ ihe nlereanya mbụ na njirimara na ndịna-emeputa. Esemokwu ya dị ike karị, ọ bụ maka mkpuchi kachasị mma nke kaadị vidiyo ahụ. E wepụrụ obere ahụhụ na njehie usoro, njikwa ahụ malitere ịrụ ọrụ nke ọma na ngwa ngwa.
Hụkwa ihe egwuregwu Sony nyere na Tokyo Game Show 2018:
N'okpuru ebe a, ị nwere ike ịhụ ọdịdị na ọdịiche nke nsụgharị atọ nke consoles ahụ.
Ụdị ntinye PS4 PS4 Pro PS4 ebughi oke
CPU AMD Jaguar 8-isi (x86-64) AMD Jaguar 8-isi (x86-64) AMD Jaguar 8-isi (x86-64)
Ikekwe gụgharia na 4K Ee e Ee Ee e
Igbe ikike 165 watts 310 watts 250 watts
Ụgbọ mmiri AV / HDMI 1.4 HDMI 2.0 HDMI 1.4
Ụkpụrụ USB USB 3.0 (x2) USB 3.0 (x3) USB 3.0 (x2)
PSVR Ee Ee toro Ee
Ogo nke njikwa 275x53x305 mm; kilogram 2.8 295x55x233 mm; arọ 3,3 n'arọ 265x39x288 mm; arọ 2.10 kg
Chọpụta ihe egwuregwu PS4 dị n'ahịa kacha mma kachasị mma:
Ya mere, nke n'ime nkwekọrịta atọ a ịhọrọ? Ọ bụrụ na-amasị gị ọsọ na ntụkwasị obi, na ị nwere ike ghara iche banyere ịchekwa ohere - eche free ịhọrọ mbụ PS4. Ọ bụrụ na ihe kachasị mkpa bụ kọmpat na ịdị ọkụ nke njikwa ahụ, nakwa ka ọ bụrụ na enweghi mkpọtụ zuru oke mgbe ị na-arụ ọrụ na ike ịzọpụta, mgbe ahụ, ị ​​ga-ahọrọ maka PS4 ebucha. Ma ọ bụrụ na ị maara na iji ọrụ dị elu, arụmọrụ kachasị na ndakọrịta na 4K TV, nkwado maka teknụzụ HDR na ọtụtụ nwelite ndị ọzọ dị gị mkpa, mgbe ahụ, PS4 Pro kachasị mara mma dị mma maka gị. Kedu ụdị mgbakọ ndị a ịhọrọ, ọ ga-abụ ihe ịga nke ọma ọ bụla.